Afarta kulan ee ugu wanaagsan baseball-ka Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Ciyaaraha Android, Tababarada
Kubbadda koleyga maahan isboorti caan ka ah Yurub. Guusheedu waxay diiradda saareysaa Waqooyiga Ameerika, Mareykanka si loo caddeeyo. In kastoo, ay tahay isboorti u adeegay sameynta ciyaaro badan. Sidoo kale ciyaaraha loogu talagalay Android, tan iyo markii xulashadu kordhay waqti ka dib.
Waayo, Kadib waxaan kuu dhaafi doonaa xulashada cayaaraha baseball ee ugu wanaagsan Android. Ciyaar taxane ah oo aad awoodid kala soo bax Play Store iyo cidda kula raaxaysanaysa ciyaartan. Diyaar ma u tahay inaad hubiso xulashada ciyaartan?
Sidoo kale, waxa ugu fiican xulashada ciyaartan ayaa ah in dhammaantood lagu soo dejisan karo bilaash qalabkayaga Android. Marka waan ku raaxeysan karnaa ciyaartan anaga oo aan diinaar ka bixin. Ciyaar noocee ah ayaa liiska ku jirta?
2 MLB 9 Qulqulka 17
4 Boqorka Kubadda Baseball!
Waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah ciyaaraha isboortiga oo leh muuqaallo fiican. Waa in la ogaadaa inay leedahay muuqaallo aad u macquul ah, sidaa darteed waxay u egtahay in isticmaalehu uu ciyaarayo baseball dhab ah. PWaxaan ka ciyaari karnaa MLB oo aan maamuli karnaa kooxaha. Intaa waxaa dheer in la qaabeeyo istiraatiijiyadda lagu kici karo sidii guuleystayaasha horyaalkan. Marka waa sidii oo kale waxaan noqoneynaa tababaraha.
La degsado kulankaan baseball for android waa lacag la'aan. In kasta oo aan ka helno wax iibsi gudaha ah.
MLB 9 Qulqulka 17
Waa ciyaar kale taas wuxuu weli yahay mid aad u daacad ah oo macquul ah horyaalka Mareykanka ee hadda jira, MLB. Kulankaan waxaan fursad u leenahay inaan ku ciyaarno 30ka garoon ee horyaalka ka jira. Ka sokow awoodda ka xusho 800 oo ciyaartoy ka jira. Waa in muuji sawirada 3D kulankaan, kaas oo ka caawiya inay ka dhigaan mid aad u macquul ah oo wax ku ool ah.
Mar labaad, degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. In kasta oo, gudaha ciyaarta aan ka helno wax iibsasho si dhakhso leh horay loogu socdo.
MLB 9 Qulqulka 21
Waxaan ku sii jirnaa baseball laakiin waxaan u dhaqaaqeynaa ciyaar aad u xiiso badan. Marka waa wax macquul ah, laakiin madadaalo badan. Sawir gacmeedyadu waxay siinayaan sharraxaad ka duwan oo waxay ka dhigayaan uun ciyaar kale oo isboorti ah. Maxaa intaa ka badan, Waa in la ogaadaa inay leedahay qaabab ciyaar oo kala duwan. Wax ka dhigaya ikhtiyaar aad u dhammaystiran oo dhammaystiran isticmaalayaasha. Waxaan ciyaari karnaa horyaal ilaa 128 kulan ah sidoo kale waxaan leenahay qaab caqabad.
Ciyaar madadaalo leh sawir wanaagsan. Sidoo kale, looma baahna in lagu xiro internetka inuu ciyaaro. The soo dejinta ciyaarta ee loogu talagalay Android waa bilaash, inkasta oo sida cayaaraha kale, aan ka helno wax ku iibsasho gudaha ah.
Developer: jilicsan jilicsan
Boqorka Kubadda Baseball!
Cinwaan kale oo ah sharad on bilicsanaanta aad u gaar ah oo kala duwan, laakiin taasi waxay ka dhigeysaa mid aad u qaas ah sababtaas. Waxay leedahay naqshadeynta 3D-ta tayadana wey fiican tahay mar walba. Sidoo kale, waa in la ogaadaa sida fudud ee kontarooladu yihiin kulankaan. Maaddaama ay ka dhigayso qofka khibrada u leh khibrad aad u wanaagsan markasta. Waxaan leenahay mid tiro badan oo kooxo iyo ciyaartoy uu ka kala xusho. Intaa waxaa dheer, sida aan u guuleysanno iyaga ayaan u habeyn karnaa iyaga.
Kala xisaabtan hababka ciyaarta kala duwan, oo ay ku jiraan qaab xirfadeed. Waxaan sidoo kale arki karnaa tirakoobka kooxdeena baseball markasta oo awood u yeesho inaad horumar ku sameyso. ka degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. Sida ciyaaraha kale, waxaad wax ku iibsataa gudaha.
Tani waa xulashadeena ciyaaraha ugu wanaagsan baseball-ka Android. Thanks to cinwaanadan, waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan oo madadaalo leh in la ogaado isboortigaan oo caan ka ah Mareykanka. Marka waa a ikhtiyaar wanaagsan oo looga baxo ciyaaraha caadiga ah ee kubbadda cagta ama kubbadda koleyga hadda loo heli karo Android. Sideed u aragtaa xulashadan cayaaraha baseball? Ma jirtaa mid adiga kuu gaar ah oo adiga kuu gaar ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha baseball ee ugu wanaagsan Android